Asa tapa-potoana - pejy fandokoana ankizy maimaim-poana
Keyword: Asa antselika
Asa tapa-potoana ho an'ny ankizy mianatra
Rehefa manana faniriana manokana tsy mety tanterahina mora ny ankizy dia tonga ny hevitra hamatsy vola azy manokana. Na ny ankizy ambaratonga voalohany aza dia manakarama ny renibeny, mamafa ny tokontany ary faly amin'ny euro iray ankoatry ny vola am-paosiny.
Rahoviana no afaka manao asa tapa-potoana ny ankizy?
Mazava ho azy fa tsy misy maharatsy an'izany ary na ny ankizy izay manome hevitra momba ny fanamboarana ny efitranon'ny zaza ao an-trano miaraka amin'ny hoe "voarara ny fampiasana zaza tsy ampy taona" dia mihetsika an-tsitrapo tampoka amin'ny fanantenana vola am-paosy izy ireo.
Sary avy amin'ny Marc Thele amin'ny pixel
Ny fanontaniana dia tsy hoe rahoviana ihany no afaka, fa koa rahoviana no afaka? Mazava ho azy fa momba ny hetsika kely foana izay mifanaraka amin'ny taona ary tsy miteraka asa mafy. Na izany aza, rehefa mihalehibe ny ankizy dia te handray asa tena mpianatra izy ireo ary avy eo ny resaka inona no avela dia tena foto-kevitra. "Asa tapa-potoana ho an'ny ankizy mpianatra" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 14. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy fampianaranaKeywords Asa fialan-tsasatra, mahazo vola, Asa antselika, Asa tapa-potoana, Asan'ny mpianatraLeave a Comment amin'ny asa tapa-potoana ho an'ny mpianatra amin'ny lisea